Golis oo Abaalmarinno gudoonsiisay ardayda kaalmaha hore ka galay Jaamacadda Boosaaso. | Golis Telecom Somalia
Golis oo Abaalmarinno gudoonsiisay ardayda kaalmaha hore ka galay Jaamacadda Boosaaso.
Shirkadda Golis Telecom Somalia ayaa kaalin mug leh ka qaadatay xafaladdii qalin jabinta ardayda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Boosaaso taas oo ka dhacday maalintii khamiistii 20/11/2014 hoolka xafladaha ee jaamcadda Boosaaso.
5tii Ardaydii kaalmaha hore u galay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ka qalin jabinayay maalintii khamiistii oo guud ahaan tiraddoodu gaaraysay 257 arday ayay shirkadu gudoonsiisay midkiiba hal Computer (Laptop) oo kamid ahaa hadiyadihii ay ugu talagashay Golis inay kula wadaagto farxada ardayda ka dhabeeyay mid kamid ah himilooyinkoodi nolosha.
Madaxa Suuqgaynta Shirkadda isgaarsiinta Golis C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) oo ka hadlay munaasabada ayaa hambalyo uu uga siday dhamaan Asaasayaasha, Maamulka, iyo shaqaalaha Shirkadda Golis u jeediyay ardayda qalin jabinjabinaysay.
“Lama soo koobi karo dareenka farxadeed ee aan dareemayno waayo waxaa noo bislaaday miro aan mudo ka dhursugaynay munaasabada aan maanta joognona waa mid kamid ah munaasabadahayagii waayo Golis iyo Bahda waxbarashadu waa Mataano sida mar walba la sheego” ayuu yiri madaxa suuqgaynta Golis C/raxmaan Dayax.
Hambalyo kadib ayuu Mudane Dayax gudoonsiiyay 5tii arday ee ugu saraysay kuliyadihii qalin jabinayay hadiyadaha ka socday shirkadda Golis oo uu sheegay inay ku dhiirigalinayaan ardayda islamarkaana ay kula qaybsanayaan farxadooda.
Dhinaca kale Maamulka Shirkadda Golis ayaa hambalyo u diray 13 kamid ah shaqaalaha Shirkadda Golis oo ku jiray arayda ka qalinjabinaysay Jaamacadda Boosaaso kuliyadaha kala duwan kuwaas oo iyaguna goob jog ahaa xafladda waxana gaarsiyay hambalyadan oo goobta ka xusay C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax).
Si kastaba ha ahaatee hadiyadaha ay shirkadda Golis Gudoonsiisay ardayda kaalmaha hore u galay kuliyadaha jaamacadda Boosaaso ayaa kamid ah barnaamijyada muhiimka ah ee ay shirkadda Golis uga qayb qaadato kor u qaadidada waxbarashada iyo gacan qabashada arayda wax ka barata dalka.